हाई ब्लड प्रेशरका बारेमा जान्नै पर्ने यी कुरा तपाईलाई थाहा छ ? जानी राखौँ - ज्ञानविज्ञान
Topics #ब्लड प्रेसरका रोगी #ब्लडप्रेसर #हाई ब्लड प्रेशर
Don't Miss it अब साङ्लासँग डराउँने होइन, खेदीखेदी समाएर दुध निकाल्नु पर्ने भो
Up Next पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन्
यसो गर्नुहोस ढाड दुखेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने ।
मानिसको मेरुदण्डका ३३ वटा हड्डीका टुक्रालाई लचकता दिंदै अनावश्यक दबाबबाट जोगाउन बीच–बीचमा नरम र लचकदार प्याड (डिस्क) हुन्छ। मेरुदण्डमा सर्भाइकल,…
अनुहारको मेकअप कसरी हटाउने ? जान्नुहोस
क्लिन्जिङ मिल्कले मेकअप त हट्छ, तर क्लिन्जिङ गरेको छालालाई त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न । मेकअप सफा गरेपछि टोनर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ ।…
यस्ता छन्, पिसाब पोल्ने समस्याबाट बच्ने केहि घरेलु उपचार
गर्मि मौसममा पानी प्रसस्त खाएन भने पिसाब पोल्ने समस्याले सताइ रहन्छ । यस्ता समस्याबाट बच्न यी घरेलु उपचार बिधी अपनाउनुहोस्ः…